यस्तो चोरी : सीसीटीभी फुटेज हेर्दा प्रहरी नै चकित ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/यस्तो चोरी : सीसीटीभी फुटेज हेर्दा प्रहरी नै चकित !
काठमाडौं । सामान्यतयाः चोरी गर्नेहरुको दिमाग धेरै सक्रिय हुने गर्दछ । उनीहरु आम मानिसहरुको तुलनमा धेरै चलाख हुन्छन् । तर कतिपय चोरीका घटनाहरु सबैलाई अच्चममा पार्ने खालका हुन्छन् । यस्तै एक चोरीको घटना भारत मध्य प्रदेशको इन्दौरमा चोरीको रोचक घटना घटेको छ ।चोरी सामान्य थियो, तर चोरले अपनाएको तरिकाले सबैलाई चकित पार्यो । एउटा अपार्टमेन्टबाट एउटा कार चोरी भएको थियो । त्यसपछि सीसीटीभी फुटेज खोजी गरियो । अनुसन्धानपछि प्रहरीहरूलाई यो आश्चर्यजनक चोरीबारे थाहा भयो ।
टोरी कर्नरको सृष्टि अपार्टमेन्टमा एउटा कार चोरी भएको थियो । फुटेज हेर्दा, चोर मोटरसाइकलबाट आएको भनेर थाहा भयो । ति चोरले मोटरसाइकलमा आएर सुरुमा कार चोर्यो र आफु चढेर आएको मोटरसाइकल त्यहाँ छोड्यो । त्यसपछि अर्को बाइक लिएर आयो अनी सुरुवातमा त्यहाँ छोडेको मोटरसाइकल लिएर गएको खुलेको छ ।अन्तिम मोटरसाइकल लिनका लागि उनी पैदल हिडेर त्यहाँ आएको फुटेजमा देखिएको छ । कार फेला परेको छ, तर चोर अझै फेला परेको छैन । एसआई भगवानसिंह पटेलले भने, ‘आरोपीको शैली र पैदल शैलीको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।
यो निर्णय गरियो कि कार जुन दिशामा गयो, त्यो दिशामा जानु पर्छ । लगातार सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि प्रहरी टीम राजाको बगैंचास्थित सरस्वती स्कूल पुगे । कार खाली ठाउँमा भेटियो ।’ प्रहरीको शंका छ कि उक्त चोर वरपरको क्षेत्रमा लुकेको हुनुपर्छ ।उनले खेतमा कार पार्क गरेका थिए, जानकारी अनुसार एक वा दुई दिनमा उनले त्यसलाई लुकाउने योजना बनाएको हुनसक्ने प्रहरीका अनुमान रहेको छ । हुलियाको आधारमा चोरको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।